Maika: fanambarana ETOA momba ny Coronavirus
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Maika: fanambarana ETOA momba ny Coronavirus
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fanabeazana • tompon'andraikitra • Safety • Fitaterana • Vaovao isan-karazany
Tamin'ny 31 Desambra 2019, nanambara ny tranga voalohany momba ny coronavirus tsy fantatra ny vaomiera Wuhan. Tao anatin'ny telo herinandro lasa dia nitombo hatrany amin'ny tranga 830 izany ka 26 no maty. Ny ankamaroan'ireto tranga ireto dia any amin'ny faritanin'i Wuhan any afovoan'i Sina, miaraka amina tranga mitokana any amin'ny faritra hafa any, Beijing, Shenzhen, Thailand, Japan ary Etazonia. Betsaka ny tranga ahiahiana fa tsy voamarina ao Hong Kong. Hatramin'izao, ireo tranga rehetra ireo dia mifandray mivantana amin'ireo olona avy any Wuhan.
Hafa noho ny tranga ahiahiana misy olona mpandeha tonga any Failandy, tsy misy tatitra momba olona marary any Eropa.
Satria sady vaovao no mivoatra haingana ny zava-misy dia tsy mazava ny fomba fifindran'ny otrikaretina sy ny fomba mora hifandraisana. Manaja azy io tokoa ny mpitondra manerantany. Ity fahamatorana ity dia hita taratra na amin'ny resaka fanambarana ara-pahasalamam-bahoaka na amin'ny fijerin'ny mpanao gazety. Coronavirus dia eo amin'ny pejy voalohany amin'ny gazety manerana an'izao tontolo izao.
Azo takarina izany ahiahy izany. Ny coronavirus dia mifandray akaiky amin'ny Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). TAMIN'NY 2002, 8,000 teo ho eo no nifanekena ka 10% no maty. Ny fahasimbana ara-bola avy amin'ny tahotra an'io dia tombanana ho eo amin'ny $ 30bn-100bn amin'ny varotra sy fivezivezena manakorontana.
"Na dia betsaka aza ny zavatra tsy fantatra momba an'ity virus vaovao ity," hoy i Tom Jenkins CEO an'ny ETOA, "Fantatsika fa ny antony nahatonga ny fiparitahan'ny SARS haingana dia tsy naverina. Ny manampahefana sinoa dia maika tamin'ny fanasongadinana ny olana, ary mamatsy fanavaozana isan'andro ny toe-javatra. Niantso ny tompon'andraikitra rehetra ny filoha Xi Jinping mba hamaha ity olana ity ho krizy nasionaly. Mety ho be finday lavitra noho ny tamin'ny 2002 ny Sinoa, saingy vonona kokoa ny firenena ary tapa-kevitra fa ho voafehy ny viriosy. Natao ny fepetra drakoniana hampiatoana ny fihanaky ny fielezana, anisan'izany ny fandrarana ny fitateram-bahoaka any ivelany any Wuhan. ”
“Ny SARS dia naparitaky ny olona tsy nahalala momba ilay aretina ary, vokatr'izany, tsy nahalala izy ireo fa avy amin'ny faritra voan'ny aretina izy ireo. Tsy izany no mitranga amin'ny taona 2020.
“Any Eropa dia efa misy ny fitandremana. Mametraka fanaraha-maso ny seranam-piaramanidina. Fanentanana lehibe ho an'ny daholobe no manomboka. Mailo ny tompon'andraikitra rehetra amin'ny fahasalamana. Ny virus dia atahorana indrindra amin'ny sehatra iraisam-pirenena, mijanona ho fandrahonana tena lavitra izy - tsy misy loza mitatao - ho an'ny mpandeha rehetra any Eropa. "